इंग्ल्याण्डविरुद्ध टी-२० खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने ३ भारतीय ब्याट्सम्यान, कसकाे कति ? - नेपालबहस
इंग्ल्याण्डविरुद्ध टी-२० खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने ३ भारतीय ब्याट्सम्यान, कसकाे कति ?
| ११:४३:१६ मा प्रकाशित
२७ फाग्न, काठमाडौं । टी-२० मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने तीन भारतीय ब्याट्सम्यान
सुरेश रैना लोकप्रिय ब्याट्सम्यान सुरेश रैनाले अन्तिम पटक नै इंग्ल्याण्डविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० म्याच खेलेका थिए । उनी टी-२० मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने तेस्रो ब्याट्सम्यान हुन् ।
रैनाले इंग्ल्याण्डविरुद्ध १३ म्याचको ११ पारीमा ३२.३३ को औसतमा २ सय ९२ रन बनाएका थिए । उनले इंग्ल्याण्डविरुद्ध १३५.८१ को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरेका थिए ।
महेन्द्रसिंह धोनी यो सूचीको दोस्रो स्थानमा पूर्वकप्तान तथा विकेटकीपर महेन्द्रसिंह धोनीको नाम छ । उनले टी-२० मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध १४ म्याचको १२ पारीमा ४९.३३ को औसतमा २ सय ९६ रन बनाएका थिए ।
धोनीले इंग्ल्याण्डविरुद्ध टी-२० मा १३३.९३ को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरेका थिए । उनले इंग्ल्याण्डविरुद्ध एक अर्धशतक बनाएका थिए ।
विराट कोहली अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने भारतीय खेलाडीको शीर्ष स्थानमा कप्तान विराट कोहली छन् । उनले हालसम्म इंग्ल्याण्डविरुद्ध १२ पारीमा ३१.४५ को औसतमा ३ सय ४६ रन बनाएका छन् ।
टी-२० मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध विराटले एक अर्धशतक बनाएका छन् । उनी टी-२० मा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान पनि हुन् ।
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो २ मिनेट पहिले
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने १४ मिनेट पहिले
गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाएका बादलले लिए शपथ ३८ मिनेट पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित ५२ मिनेट पहिले
पौडेल निवासमा नेताहरुको जमघट सुरू ४ हप्ता पहिले
कार्यकक्षमै गाउँपालिका अध्यक्षमाथि खुकुरी प्रहार ९ महिना पहिले
सुनकाे मूल्यमा नयाँ रेकर्ड ९ महिना पहिले
हाँडीगाउँबाट बाघको छालासहित एक जना पक्राउ २ महिना पहिले
नेपाल बैंकले सामुदायिक विद्यालयका छात्राका खाता खोल्दै ७ महिना पहिले